Mareykanka oo war aysan ku farxeyn Somaliland kasoo saaray booqashada Muuse Biixi ee Washington - Caasimada Online
Home Somaliland Mareykanka oo war aysan ku farxeyn Somaliland kasoo saaray booqashada Muuse Biixi...
Mareykanka oo war aysan ku farxeyn Somaliland kasoo saaray booqashada Muuse Biixi ee Washington
Muqdisho (Caasimada Online) – Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry André ayaa sheegay in safarka madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ee Washington uusan waxba ka beddeli doonin mowqifka dowladdiisa ee ku wajahan Soomaaliya.
Muuse Biixi ayaa waxaa Washington ku casuumay hay’adda daraasaadka siyaasadda ee Heritage Foundation, oo ah hay’ad siyaasad ahaan u janjeerta dhanka siyaasadda midigta.
André, oo wareysi gaar ah siiyey warbaahinta Garowe Online, ayaa sheegay in inkasta oo Washington ay xushmeyso guulaha Somaliland, haddana ay weli u aragto gobol ka mid ah federaalka Soomaaliya.
“Muuse Biixi, madaxweynaha gobolka Somaliland ee Soomaaliya, wuxuu Washington DC u booqanayaa si iskiis ah. Wuxuu la kulmi doonaa kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibedda ee Afrika Molly Phee,” ayuu yiri.
“Waan xushmeynaa guulaha gobolka Somaliland, marka ay noqoto maamulka dimoqraadiyadda, horumarka dhaqaalaha iyo ammaanka. Waxaan mas’uuliyiinta Somaliland kala shaqeynaa hadafyada aan wadaagno, si la mid ah sidaan ugala shaqeyno maamullada kale ee federaalka,” ayuu ku daray.
Safiirka ayaa mar kale adkeeyey midnimada Soomaaliya iyo sida ay dowladda Mareykanka uga go’an tahay.
“Dowladda Mareykanka waxay aqoonsan tahay madax-banaanida iyo sharafta dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee xuduudaheeda taariikhiga ah oo ay ku jirto Somaliland,” ayuu yiri.
“Waxaan su’aasha maqaamka Somaliland u aragnaa arrin u taalla shacabka Soomaaliyeed oo ay ku jirto Somaliland inay go’aan ka gaaraan.”
Muuse Biixi ayaa maanta khudbad ka jeediyey xarunta Heritage Foundation, hase yeeshee ma aysan joogin dad badan marka laga reebo dhowr qof oo ajaaniib ah, waxaana badanaa hoolka fadhiyey shacabka Somaliland ee ku nool aagga Washington.